Xaalad Cakaran oo ka jirta Kismaayo ka dib markii wafuudii dowlada lagu wargaliyey in ay magaalada isaga baxaan – idalenews.com
Tan iyo markii ay magaalada Kismaayo loogaga dhawaaqey madaxweyneyaal iska soo horjeeda waxaa magaalada Kismaayo soo food saartey cabsi dagaal iyo kala qeybsanaan weyn oo beelaha wada dega Kismaayo. Waxayna Xaalada Kismaayo uga sii darey markii dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa iyadu wafuud isdba jooga ah u dirte magaalada iyadoo aan lagu wargelin maamulka ugu tunka weyn ee ka arrimaya magaalada oo sheegey iyagu dhankooda ku eedeeyey in dowladu ay hurineyso colaad dadka deegaanka dhexdooda ah.
Axmed Madoobe oo dhowaan loo doortay Madaxweynaha Jubaland ayaa ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay colaad ka dhex hurineyso bulshada ku nool deegaanada Jubooyinka.
Wareysi uu siiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayuu dowladda Soomaaliya ku eedeeyay in wafdiyada ay u soo dirtay Kismaayo aanay kala tashan, kuna soo wargelin, isla markaana maalin walba wafdiyo ay isaga soo daba dirto Kismaayo.
“Hadii dariiqan hada ku socoto dowladda wax ka bedelin dadka iyagaa tashan doona, wafdiyo ayay halkan isaga soo daba direysaa, naguma soo wargelineyso, shalay mid baa yimid, horay kuwa ayaa u yimaadeen, intaas oo dhan daaqada ayay ka soo galayeen, nagalama tashaneyn”ayuu yiri Axmed Madoobe.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in cadeymo u hayaan in dowladda ay abuureyso mushkilada ka taagan Kismaayo, ayna lacago ku bixineyso shaqsiyaadka sheeganaya Madaxweynayaal, ciidamadana ay ka dhex hurineyso colaad sida uu yiri.
“Inta dhibaato ee maanta Kismaayo ka jirta dowladda ayaa abuureysa, iyadaa halkan u soo diray afar nin oo xaafadaha ka sheeganaya Madaxweynayaal, lacago ay siineysa, xataa ciidamada ayay dagaal rabtaa inay geliso, ma ahan in dib loogu laabto 1991, dagaaladii sookeeye”ayuu yiri Axmed Madoobe.
Sidoo kale Axmed Madoobe ayaa sheegay in hadii dowladda Soomaaliya aysan ku dhaqmin dastuurka ay ku dhisan tahay ay la soo noqonayaan Xildhibaanadooda.
“Hadii Dastuurka iyada ku timid oo aqoonsan weydo, oo ay ka dambeyn doonto Xildhibaanadeena ayaa u yeeraneynaa, wax sax ma ahan wax ay ku dhaqmeyso mowqif ayaana ka qaadaneyna”ayuu si kulul u yiri Axmed Madoobe.
Magaalada Kismaayo ayaa xaaladkeedu u muuqdaa mid qasan, waxaana maamulka Jubbaland ee Axmed Madoobe iyo Fartaag ay si cad ugu eedeeyeen dowlada federaalka Soomaaliya iney hurineysa colaad dagaal, halka dowlada federaalka Somalia dhankeeda sheegtey in ay ka shaqeyneyso dib u heshiisiin iyo maamul loo sameeyo Kismaayo.